Pep Guardiola oo ka warbixiyay hadalkii muranka dhaliyay uu ka sheegay Sadio Mané – Gool FM
(Manchester) 05 Nof 2019. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay inuusan dooneyn inuu ku tilmaamo xiddiga naadiga Liverpool ee Sadio Mané inuu yahay mid istuur tuur badan.
Pep Guardiola ayaa kaddib kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka Premier League wuuu sheegay in mararka qaar Sadio Mané uu yahay mid si ula kac ah isku tuura, taasoo ugu dambeyntii uu jawaab cad ka biiyay macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp.
Haddaba 48 jirkan leyliya kooxda Manchester City ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor ciyaarta ay habeen dambe naadiga Atalanta ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League, wuxuuna fursad u helay inuu ka warbixiyo waxa uu kala jeeday hadalkii uu ka sheegay Sadio Mané ee muranka xoogan dhaliyay wuuuna yiri:
“Marka ay guul gaarto Liverpool daqiiqadaha ugu dambeeya, markasta wiilkeyga iyo gabadheyda waxay sheegaan in Liverpool ay tahay koox nasiib badan, anigana waxaan iyaga ku dhahaa maya”.
“Waxa ay in badan sameysay Liverpool xilli ciyaareedkan iyo xilli ciyaareedkii hore, waxaa sabab u ah inay heysato tayo cajiib ah oo ay ku dagaalamaan ilaa iyo dhamaadka”.
“Taasi waxay aheyd ujeedkeyga ah inaan ka ka hadlo, laakiin waxay aheyd mid ka fog inaan iraahdo Mane wuxuu ka mid yahay nooca ciyaartoyda u sameysan inay istuur-tuuraan”.
“Garsoorka iyo Var waxay sheegeen inay tahay rigoore, laga yaabee inaan qaldamay sidaa daraadeed uma qabin inay rigoore tahay”.
“Waxaan ahaa qof qaldan oo waxaan u maleynayay inaysan rigoore aheyn, sida uu Jürgen Klopp sheegayo, wuxuu garanayaa Sadio Mané in ka badan inta aan aniga garanayo, la shaqeynta Klopp wuxuu isku dayayaa inuu wanaagsanaado”.
Barcelona oo barbaro la dhaafi weysay Kooxda Slavia Prague oo marti ugu aheyd Camp Nou... +SAWIRRO